Shirweynihii Eurosom 2014 oo qodobo muhiim ah looga hadlay. | http://kismaayodaily.com
Shirweynihii Eurosom 2014 oo qodobo muhiim ah looga hadlay.
www.kismaayodaily.com – your gate way of Somali/Djabouti Sports news around the world
UEROSOM opo ah dallad ay ku mideysan yihiin ururada Soomaalida ee ka jira Yurub ayaa shir weynohoodii sanadlaha ahaa oo lagu qabtay magaalada Goteberg ee wadanka iswiidhan waxaa lagu daahfuray warbixinguud oo ay soo jeediyeen gudiga qabanqaabada ee ururka SSK waxqabadka iyo diyaargarowga tartanka ayagoo si diirana u soo dhaweeyay dhamaan wufuudii ka soo qeybgashay shirweynaha Eurosom.
kadib waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha gudiga farsamada iyo anshaxa ahna wakiilka Eurosom ee Somalia Mudane Muriidi Nur Zein oo ka hadlay waxqabadkii ururka ee marxaladihii la so dhaafay islamarkaana ka warbixiyay arimihii loo wakiishay iyo meesha ay wax marayaan.
waxaa kaloo asagana meesha ka hadlay Mudane Maxamuud Kaji Nur oo ka warbixiyay dhinaca ururka dhaqaalaha asagoo si aad ahna ugu mahad celiyay dhamaan ururada muujiyay wada shaqeynta hufan.
Intaas ka dib waxaa hadalka lagu soo dhaweeyay gudiga marjica ee Eurosom u mahad celiyay ururka martida loo yahay ee SSK iyo dhamaa wufuudii ka soo qeybgashay shirweynaha Eurosom ee 2014 kadib waxaa horhoray loo guda galay ajandihii shirkweynaha ururka Eurosom ee 2014 waxaa halkaa warbixino kala duwan ka jeediyay dhamaan ururada ku abtirsada ururka Eurosom .
Ka dib odayaasha waxaa ay guda galeen ajandahaa shirka halkaasoo oo maamulkii hore oo uu waqtigoodu dhamaaday xilka ku wareejiyeen gudiga marjica ee Eurosom ka dib waxaa la guda galay in la doorton maamulcusub kaasoo badali doona kii hore.
Sida ku qoran dastuurka eurosom waxaa ay ururada ka tirsan eurosom ay u doorteen in uu gudoomiye u noqdo ururka Eurosom Mudane Ibraahim Ahmed Takar (jangoan) 4sano ee soo socota waxaa kalo loo doortat gudoomiye ku xigeenka koowaad ee ururka Eurosom mudane Ismaciil mohamed muxiyadiin iyo kuxigeenka 2aad ahna gudomiyaha gudiga farsamada iyo anshaxa oo loo doortay mudane Muriidi Nur zein dhanka maaliyada waxaa loo dortay mudane Yoonis Khaliif iyo xoghayaha guud ee ururka Eurosom Mudane Shariif Hashim Sh Hassan.
intaas ka dib waxaa looga sii gudbay qabanqaabadii tartanka cayaaraha gudaha ee 2014 halkaas oo ay ku wada ciyarayeen kooxo ka kala socdya wadamada Finland, Norway, Denmark, Sweden ciyarahaas oo u dhacay si xiiso leh dadweynihii dawanayayna ay aad uga heleen qaabciyaareed ay soo bandhigeen dhalinyarada da,da yar ee ka qeybgalayay kulanka. Tartankaas oo lagu qaadayay dhibcotirsi aya waxaa ku guuleysatay kooxdii ku ciyaareysay magaca ururka Somalisk Goteberg kaalinta labaad ku adkaaday kooxda Trondheim tigers ee wadanka Norway, kaalinta sedaxaadna waxa ku guuleystay kooxda Kanava ee Wadanka Finland.
Markuu tartanka dhamaaday waxaa goobta ka hadlay gudiga qabanqaabada oo u mahad celiyay dhamaan ka soo qeybgalayaasha tartanka una hambalyeeyay kooxdii ku guuleysatay ka dib waxaa lagu abaalmariyay shaqsiyaadkii sida wanaagsan uga soo shaqeeyay in uu qabsoomo tartanka.
ka dib waxaa makrifoonka lagu soo dhaweeyay Gudoomiyaha Cusub ee ururka Eurosom mudane Ibraahim Ahmed Takar oo u mahadceliyay Gudiga qabanqaabada iyo dhamaan ciyaartoyda.
maamuladooda, macalimiinta, taageerayaasha iyo dhamaan bahweynta Eurosom waxaana uu halkaa ku gudoonsiiyay abaalmarinadii loogu talo galay Kooxaha 1aadka iyo 2baadka una hambalyeeyay kooxdii ku guuleysatay tartanka 2014 asagoo u rajeeyay kooxihii ka soo qeybgalay in wadamadooda samo ku geeyo.
By Cabdirashiid Cabdi Axmed (Rashka)
Kismaayodaily On April - 16 - 2014
Somali Diaspora, Somali sport., Somalia
Retired Somali Int’l Ass Ref focuses on instructor field.
Bahweynta k/cagta oo tacsi u diray Guddoomiyaha Xiriirka K/Cagta geeridii ku timid walaalkiis